दाङ, १४ साउन । दाङका ऋषि परियार विश्व कीर्तिमान तोड्ने दौडमा छन् । उनी दुवै खुट्टामाथि पारेर गरिने ‘पुसअप’मा विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने दौडमा छन् । गिनिजबुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा अहिलेसम्म खुट्टामाथि पारेर एक मिनेटमा ५१ पटक मात्रै पुसअप गरेको रेकर्ड छ । बेलारूसका सिर्हेई कुडायौले सन् २०१८ मे ३ मा ५१ पटक पुसअप गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेका थिए ।
त्यो रेकर्डलाई कसैले पनि तोड्न सकेका छैनन् । तर, दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपाकिा–३ निवासी ऋषि परियार यो रेकर्ड तोड्ने क्रममा छन् । विश्व रेकर्डका लागि उहाँले सोमबार तुलसीपुरमा भिडियो रेकर्ड गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको सहयोगमा उहाँले एक मिनेटमा ६० पटक पुसअप गरेको भिडियोसमेत तयार पारेका छन् ।
उक्त भिडियो तथा साक्षीहरुको भिडियोलाई गिनिजबुक अफ वल्र्ड रेकर्डको कार्यालयमा इमेल गर्ने ऋषिले बताए । उनका अनुसार रेकर्ड भएको उक्त भिडियोसहित करीब रु एक लाख पठाउनुपर्ने र त्यसको नतिजा १०÷१५ दिनमा आइपुग्छ । “मैले आज गरेको पुसअप गरेको भिडियो र साक्षीहरुको रेकर्ड गिनिजबुकको कार्यालयमा पठाउनुपर्छ”, उनले भने, “त्योसँगै करीब रु एक लाख पठाएपछि १०÷१५ दिनमा नतिजा आउँछ, यदि पैसा नपठाएको खण्डमा भने नतिजा आउन पाँच÷सात महीना लाग्छ ।” तुलसीपुर उपमहानगरपालिका युवा तथा खेलकूद शाखाको सहयोगमा उहाँ यस पटक गिनिजबुकमा नाम लेखाउने दौडमा हुन्।
परियारले गिनिजबुकमा नाम लेखाएर उक्त खेल क्षेत्रमा नेपालको नाम विश्वमै चिनाउने योजना बनाएको बताए । यसमा उपमहानगरपालिकाले पनि सहयोग गर्ने उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए । उनका अनुसार अहिले ऋषिलाई गिनिजबुकमा नाम लेखाउन मद्दत गर्नका लागि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले रु एक लाख १५ हजारसमेत सहयोग गरेको छ ।
तुलसीपुर निवासी परियारले गिनिजबुकमा नाम लेखाउन सफल भएमा खेल क्षेत्रमा तुलसीपुरको नाम अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्नेसमेत पाण्डेले बताए । “हामीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई ‘स्पोर्ट सिटी’का रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ”, उनले भने, “सोहीअनुसार हामीले यहाँका खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ, अहिले ऋषिले विश्व रेकर्ड तोड्न सफल भएमा उपमहानगरलाई थप मद्दत पुग्छ ।”
साथै ऋषिलाई गिनिजबुकमा नाम लेखाउन आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन उपमहानगरपालिकाले पहल थाल्ने तुलसीपुर उपमहानगर युवा तथा खेलकूद संयोजक अमर नेपालीले बताए।
हातले टेकेर तीन किलोमिटर हिँड्छन् ऋषि
ऋषिको गिनिजबुकमा नाम लेखाउने सपना अहिलेको भने होइन । उनले अहिले हातले टेकेर तीन किलोमिटर हिँडेर गिनिजबुकमा नाम लेखाउने दौडमा पनि हुन् । उनले चार महीनाअघि हातले टेकेर तीन किलोमिटर दुरी पार गरेको भिडियो गिनिजबुकको कार्यालयमा पठाएका थिए । त्यसको नतिजाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ ऋषि । विगत चार÷पाँच वर्षअघिदेखि गिनिजबुकमा नाम लेखाउने दौडमा हिँडेका ऋषि आर्थिक अभावमा त्यसले सफलता नपाएको बताउँछन् । तर, उनको अठोट भने जसरी पनि गिनिजबुकमा नाम लेखाएर छाड्ने छ । “अर्थाभावले मैले गिनिजबुकमा नाम लेखाउन सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “तर एकपटक जसरी पनि गिनिजबुकमा नाम लेखाएरै छाड्छु ।”
सानैदेखि खेल क्षेत्रमा रुचि राख्ने ऋषि जिम्न्यास्टिक, उफ्रने, दौडने, खेल खेल्ने गर्थे । यसमा उनको रुचि पनि बढी थियो । उनले केही वर्षअघि सोच्नुभयो, ‘मानिस खुट्टाले त हिँड्छन्, तर हातले हिँडे कस्तो हुन्छ होला ?’ उनले मनमा उक्त प्रश्न खेलाइरहन मान्नुभएन्, अनि आफँै हातले हिँड्ने प्रयास गर्न थाले ।
प्रयास गर्दै जाँदा परियारले विस्तारै हातले उभिन सिके । अनि केही समयको प्रयासपछि विस्तारै–विस्तारै हिँड्न शुरु गरे । यसरी प्रयास गर्दै जाँदा अहिले उहाँ हातले हिँड्न थालेको १३ वर्ष पुग्यो । लामो सङ्घर्ष र प्रयासपछि उनी अहिले उकालो, आरालोसमेत हिँड्नसक्ने भएका छन् । यही सीपलाई लिएर उनी विश्व कीर्तिमानी कायम गरी आफ्नो जन्मभूमि र देशलाई चिनाउने दौडमा हुन् ।
सूर्यले धान्न सक्लान् गोकुलको बिँडो ?
काठमाडौं, ११ फागुन । सेक्युरिटी प्रेस खरिद सम्बन्धमा कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...
भारतको रियल स्टेटमा ट्रम्पको ठूलो लगानी, यी शहरमा छन् भव्य महल
एजेन्सी, ११ फाल्गुन । अमेरिकी राष्ट्रपति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दुईदिने भ्रमणका क्रममा भोलि (सोमबार) भारत आउँदैछन् । राष्ट्रपति...
जन्मदिनमा आफैंले जारी गरेको आचारसंहितालाई चुनौति दिँदै अध्यक्ष ओली
काठमाडौं, ११ फागुन । माघको पहिलो साता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ११ बुँदे आचारसंहिता जारी गर्‍यो । नेकपा...
काठमाडौँ, ११ फाल्गुन । विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास अझै कम हुन सकेको छ । पछिल्लो एक रिपोर्ट अनुसार कोरोना भाइरसका कारण विश्वभर...
गोकुलले राजीनामा दिँदा मलाई धेरै खुसी लागेको छैनः गगन थापा
फागुन ७ गते नेपालगञ्जको कार्यक्रममा सहभागी हुन आएको थिएँ । ६ गते आउँदै गर्दा काठमाडौंकै विमानस्थलमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीजीसँग...
आयुष्मानको फिल्म शुभ मंगल ज्यादाको दुई दिनको कमाई कति ?
काठमाडौँ, ११ फाल्गुन । शुक्रबार रिलिज भएको आयुष्मान खुरानाको फिल्म शुभ मंगल ज्यादाले बक्स अफिसमा राम्रो कमाई गर्न सफल भएको...
काठमाडौं, ११ फागुन । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा नेता गोकुल बाँस्कोटालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान...